Kalak Vodka – New Lady Irish Imimoya Imboni
Irish umbhali Whisky uStuart McNamara eshintsha inkomishi lendze ukuzama intokazi entsha ye-Irish Imimoya Imboni, Kalak Vodka.
Kukhona intokazi entsha Ireland ngubani kumayelana kuphazamise up Irish Imimoya umkhakha. nethimba lakhe Abaphathi babeqaphele wangimemela ukuyihlangabeza emasontweni ambalwa edlule lapho asithatha iphathi kule Irish Whiskey Museum ukumemezela ukufika kwakhe, kodwa ngeshwa, Ngineminyaka engu phesheya. Abangane zami ezazingathandi ngana kuye ngalobuya busuku bakhe kwakubonakala umxhwele kakhulu ngubani bahlangana ngalobo busuku. "Ngitshele okuningi?" Ngibuzile, kodwa bonke abayenza kwaba smile bese uthi "Uyazibonela nje nawe!".
Akuzange kwaphela isikhathi eside ngaphambi ngathola isimemo yesibili ukuhlangana eqenjini lakhe. Ukuhamba ku Eliphezulu at Kinkara e Ranalagh zokugcina ngoLwesine kusihlwa iqembu lakhe lesibili, Ngangisolo sakara. Engangisibone izithombe futhi wayebonakala ubude, nenhle, abasha futhi beqiniseka. Kodwa kwakunesinye futhi streak ezineqhwa mhlawumbe?
Futhi igama lakhe - Kalak. Nakanjani nethonya Slavic khona. Njengoba mina izitebhisi emincane engadini ophahleni, Ngagijima ngokusebenzisa uhla yami imikhonzo evela eminyakeni ayichitha e naseYurophu eMaphakathi neseMpumalanga. Lapho ngihamba yonkana decking engenisa ukukhanya kwelanga ngesikhathi Kinkara, Ngabona wakhe bheka, wayemi ngasemnikelweni wakhe MD Patrick Shelley. Hi Ngathi, Ngingumfana uStuart. Hi uStuart, Ngingumfana Kalak, uthe, endaweni efudumele West Cork nokugqamisa!
Uyabona, Kalak livela Cailleach, igama Irish Ulimi yasendulo Irish uNkulunkulu ka Winter, eside ezihlobene ne-enhle Peninsula Beara e ejulile Cork West enhlonhlweni Eningizimu kakhulu Ireland.
Ukuze Kalak akuyena umuntu, kodwa isandla entsha acatshangelwe Irish Vodka kusukela West Cork wenza kusukela quadruple distilled Irish lwemithombo ibhali Mash. I-vodka siphelile ke wasika nge West Cork Spring Water ne-carbon ehlungiwe, okwenza kube omunye abushelelezi ukuphuza vodkas engake banambitha.
Kalak Irish Vodka – Waba Nomoya Ezingokomoya
I izinhlangano nge kathathu distilled lwemithombo olulodwa nogologo zisobala futhi unjalo ukunambitheka. Kukhona of creaminess nokudepha bazizwa umlomo kusukela ibhali malted ukuthi engingakaze ngiyizwe nanoma iyiphi enye vodka ukuthi nginambithile. Kuyo yonke iminyaka yami ukusebenza futhi ophilayo eMpumalanga Yurophu AseBalkan, okomoya Slavic emzini Vodka, Mina bakhona abakaze bayidle le lutho we izinga elinengqondo Kalak. Njengomhlaba Japanese ukwenza Scotch kangcono, manje sengathi Irish ukwenza Vodka kangcono!
Futhi Kalak Vodkais umoya okungokomoya. Ngase ngihlale khona iminyaka Ekuqaleni ukuthi Julayi usuku efudumele nahlulele Abanemimoya Wines izigaba Quality Irish Ukudla Imiklomelo. Lapha, izimpawu ziya iwine futhi walahleka izinga iphakeji isethulo kanye ukunambitheka kanye nekhwalithi yomkhiqizo, njengoba Feel isici Good uma muntu othenga ibhodlela premium lemimoya futhi ngakho, zibaluleke kangaka.
Kuphela esingangesonto noma kanjalo, I badabula emangalisayo Loop Whisky Isitolo at Dublin Airport uhlela ngokugcwele aphathe ngokwami ​​ukuba ibhodlela a Whisky ekhetheke kakhulu premium Irish nge "esiyingqayizivele" ukhuni sekugcineni. Abangane bami kumjikelezo langibonisa ukunambitheka njengoba ngangingazange ngilibone olusemthethweni cindezela kwethulwa ngasekuqaleni kwesonto. Kwakujabulisa! Ngaya ukuthenga ibhodlela kodwa wathola ukuthi ibhodlela premium nogologo lanikezelwa ngo igama izinkuni kuyo oneminyaka engu-ubekade amakhadibhodi ibhokisi ezishibhile. Kukhona-ke wema eshalofini sizungezwe stablemates nenkanyiso encane, bonke abahlezi ngokuzazisa siqu amabhokisi sokhuni. Angizange ukuthenga, ngoba ngokuzumayo angizange ngizizwe ngikhethekile. Ubani othenga i-Rolls Royce ngendwangu Upholstery!
Kodwa Kalak baye kuhloliwe wonke amabhokisi. Ibhodlela mude ukwenzela ukungena okuncane kakhulu nenhle, I Ice Abasebenzi Kalak is esivelele Vodka lettering futhi egcotshwa ne izimpondo zenyamazane we inyamazane ababengamadoda Amasosha Cailleach ku Irish Winter. Lena Vodka eliphefumulelwe futhi emangalisayo Irish e ubucwebecwebe Bespoke. Ubungazizwa yini ngaleyo ukuthenga ekhethekile noma ethola Kalak isipho? Yebo!
Kalak Vodka – Buyekeza
Tipperary ozalwa MD Kalak uPatrick Shelley, onesifo phezu 15 eminingi isakhiwo elibizayo Iziphuzo emakethe nokumaketha imikhiqizo International yisakhiwo sodumo uchaza.
"Ngangingeyena ophuzayo vodka kuze kakhulu muva, ngoba ngangikuzwa vodka ngokuvamile ukuba nengenaphunga futhi kunganambitheki. Ngangifuna ukwakha vodka ukuthi 'mina’ ababeyozijabulela, omunye ukunambitheka, uhlamvu nokujula kanye nobumsulwa olubushelelezi. Uma kungekho okunye, Ngiye okungenani uthole vodka Angikwazi ukujabulela nge Kalak Vodka!"
Yini okumangalisa nakakhulu wukuthi Patrick kuqede ngempumelelo umsebenzi wonke uyophela okungokwakhe kungekho zimali bangaphandle. Angisazi manje ukubona lokuthi waligcina izinkonzo owaziwa Scottish Master Distiller uDkt. Jim Swan. Patrick futhi esheshayo ukuze udumise ukusekela Irish Ukudla IBhodi An Bord Bia e ngokumsiza Brink Kalak Vodka wakhe iphupho emakethe.
Kungenzeka zasehlobo, kodwa phawula lokho Ngithi! Lokhu Winter kuyoba konke mayelana Kalak Vodka, e-Ireland futhi phesheya!
Kalak Vodka zuza buvelele kanjani ngempela Pooka 3 Umklomelo zinga ngayo Whisky Irish njenge Yellow Spot. Manje, yini ebingenzeka uma thina abaneminyaka ezinye Kalak e Irish Oak imiphongolo ngoba 10 iminyaka! Vele umbono!